Mgbapu a na-achịkwa nke brand 'rechts', Trump, the Brexit (na ihe niile ejikọrọ ya) amalitela: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 13 June 2019	• 12 Comments
N'ime izu ndị na-adịbeghị anya, anyị ahụwo mkpọmkpọ ebe a na-achịkwa nke e ji rụọ ọrụ 'ziri ezi'. A ghaghị iji akara netwọk ndị a zụrụ nke ọma na-egosipụta akara ahụ: site na Donald Trump na US, Marine le Pen na France na Thierry Baudet na Netherlands. Ejiri akara ahụ iji jide n'aka na echiche ndị dị oké njọ site na mgbasa ozi na-emetụta echiche aghụghọ na n'ime ihe ndị na-eme ezi aka na-eme. Mgbe ahụ, a ghaghị imegharị ika ahụ na oke aka ya na onye nwe obodo na ọbụna onye omekorị na onye na-enweghị mmasị n'ebe ụmụ nwanyị nọ.
N'ezie Donald Trump ka na-abụ onyeisi oche na United States na ọ bụ ezie na usoro Brexit ka na-aga n'ihu, mana m buru amụma na ha abụọ ga-abụ mmalite nke ọdịda. Ụda ga-amalite agha ahịa iji mee ka onye ukwu dị ukwuu maka ọdịda akụ na ụba nke nnukwu alaeze ndị America. Ọdịda nke Brexit, ma ọ bụghị site na njirimara ma ọ bụ (nke kachasị ọhụrụ) ya adịghị akwụ ụgwọ ahụ na Europe, aghaghi iduga nlekota ego na EU. Nke a kwesịrị igosi ụwa dum na "ika nri" (ya mere ndị nkatọ) bụ ndị ikpe maka ọdịda na ọdachi.
Ihe mere anyị ji hụ Donald Trump na-emegbu onye isi obodo London na izu ụka na ihe kpatara ya ji kpọọ nwunye Harry Harry Meche Markle "mkparị" bụ otu ihe mere anyị ji hụ ya ka ọ bụrụ nwunye - okwu na-enweghị mmasị ma jikọọ ya na porn omee. Ọ ghaghị inwe ihe oyiyi dị oke njọ, ka ndị mmadụ wee nwee mmetụta dị oke aka n'akụkụ nkuzi. A na - ejikọta nsogbu ahụ na njigide nile nke aka nri (akara 'nri'). Ọ bụ ahịa niile (mgbasa ozi).
Ịnwere ike ịjikọta ìgwè ahụ na otu ọhụrụ ma ọ bụ - kama - ochie - ika. Anyị na-ahụworị ochie ochie ahụ. Vidio dị n'okpuru na-egosi otu esi ejikọta njikọ ahụ na ochie ochie ahụ. Vidiyo ahụ malitere ịrịa na Facebook ma gosipụta kpọmkwem ihe ebumnuche bụ. Njichi ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achịkwa na mgbasa ozi ejiriwo n'aka na ikike ahụ ghọrọ akara na na echiche ọ bụla kpuchie echiche edo Ejikọtara ya. Ọ bụghịzi echiche gị; isi bụ na ọ bụrụ na ị nwere echiche, ị na-akpa aka na ya. Ma a na-ejikọta akara ahụ ugbu a site na nkwụsị site na nke 'Nazi'.
Nkọwa dị egwu nke na-egosi n'ụzọ doro anya na mmekọrịta dị egwu nke mgbasa ozi, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbasa ozi ọha na eze na-arụ ọrụ. Egwuregwu ndị dị na vidio na-anọchi anya stigmas edo jikọta aka na nku aka nri (nke onwe-kere). Njikọ ahụ doro anya ma doo anya na vidiyo a bụ ihe a na-ekwu na 25e nke abụọ n'ime vidiyo: "Eleghị anya m dịkwa oke ikike ma ọ bụ gịnị?"(Pịa na ndepụta okwu).
Emela ka ndị otu agbụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ n'aka ekpe ma ọ bụ aka nri kwadoro gị. Kwụsị ịme ntuli aka, etinyela aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ịmepụta ihe. A ga-emesị mee ka gị na ndị na-ahụ maka ọrụ na ndị Nazi mara ihe. N'ihi ya, a ga-amachibido echiche ahụ dị oke egwu na ọ ga-etinye aka na udo.
89 Ekpere Oké Mgbukpọ nke Germany na-agba ọsọ na-agba ọsọ na mkpọrọ
Tags: izu nkata, na-aṅụ, agba, ihe nkiri, im, njikọ, ika, Nazi, Nazis, nazikeule, Nazism, rechts, Alaeze Ukwu, stigmatization, video
Stiff dere, sị:
13 June 2019 na 13: 03
Ee, ọ bụ ihe doro anya ... ụda donald, marie le le penn na maka oge ikpeazụ fvd na-agbanyekwa Alakụba na lmfao. Echere m na ihe ngwọta bụ ọbụna ọpụpụ ọzọ ... wee ghara ịme ntuli aka ... ha chọrọ agha obodo na NL mana maka na ha ga-eme ka esemokwu, na-ata ụta maka ikike maka akụ na ụba, ndị Alakụba maka nhazigharị na ihe ndị ọzọ, tinyere aka ekpe maka ọtụtụ iwu obodo.
Masonic motto order out of chaos .. M nwekwara motto ... chaos nke ọgba aghara ma hụ na ọ nweghị usoro nwere ike ibili. Ha choro ka ndi oru nchedo di iche iche na-acho dika breeki maka mkpofu a na-achikota, n'enweghi uzo a ga-enwe ogbaaghara ebighi ebi.
Ejila ntuli aka ma kwalite mmemme ọpụpụ nke obodo ... naanị gwa ndị mmadụ na a ka nwere ọtụtụ nde ndị ọzọ.
Onye ozi ohuru a nke Sweden kwukwara na ha ka nwere ike iburu 30 nde ndebata. Ọ bụrụ n'ezie na ha chọrọ ikpochapụ agbụrụ ọcha ahụ, ha agaghị adabere na nnukwu elekere ma jiri anya gị hụ okwu ndị dị otú ahụ. Ị ga-ekpughe atụmatụ gị nke ukwuu lol?
Ka ihe niile gbawaa .. mgbe niile a ga-ebibi osisi nuklia niile, Israel, USA na ụwa ndị ọzọ. Israel ga-alaghachi na Nkume Age na ndị okenye ga-enwe aka efu. Naanị egwu egwuregwu ahụ iji nwụọ ma ọ bụrụ na ha amaja
13 June 2019 na 13: 38
Nnukwu isiokwu, kwenye kpam kpam! A sị ka e kwuwe, ọnọdụ quo nwere ike ghara ịnọ n'ihe ize ndụ. Na-aga n'ihu, nwee obi ụtọ ịkwụ ụtụ isi, mee ka olu gị pụọ ma ọ bụrụ na ọ dị irè, ị nwere ike belata ike iche echiche gị. Ndị na-agba ụkwụ na-eche echiche dị oke egwu maka gị nke mezigharịla usoro mmezi ihe ...
13 June 2019 na 15: 52
13 June 2019 na 16: 04
Oh na ndị pyromaniac luciferian ejirila ọtụtụ ebe dị ọkụ kpuchie mkpịsị aka ha mgbe e mesịrị. Ọ bụghị ikwu banyere ọnụọgụgụ nke ihe ndị na-emepụta ihe na-abawanye uru site na 2008 ma na-adị na ọkwa dị iche iche dị iche iche, na-eche banyere Deutsche Bank
15 June 2019 na 00: 03
dịka Chris si IMF si kwuo, e nwere ihe ndị ọzọ ọzọ (gụọ ihe ọkụ ọkụ) .. tinye aka gị n'obi gị (ụkwara) ho ma 😀
17 June 2019 na 12: 37
ha ka bụ nzọụkwụ na-aga n'ihu m 😛 mgbe niile mergers failed, ugbu a, a ọjọọ akụ nke 50 ijeri na-etinye niile trillions nke ihe mgbakwasị na ya ....
18 June 2019 na 12: 54
Ọ na-aghọ mmega ahụ dị mwute, ọ bụ ihe dị iche iche mgbe emesịrị akụkọ hosanna site na ọnwa ole na ole gara aga.
Ee Klaas (BIS) Ekwenyeghị m gị na mmegharị aka gị, okwu ECB na Draghi adịghị adaba arụmụka ya niile, ezigbo ehihie
18 June 2019 na 13: 55
ịkpụ, kpụchaa na ịgba, ma Neanderthal na-anọdụ ala. Naanị na madurodam ezigbo ndị mmadụ
18 June 2019 na 16: 33
hahaha na Klaas, anyị maara onye nọ na njikwa
11 July 2019 na 13: 33
13 June 2019 na 16: 02
Ihe ị na-ede bụ ihe zuru ezu!
Ndị mmadụ nwere ike icheta onye nwere ihe kpatara nke a.
chi ma obu iwu dere, sị:
16 June 2019 na 16: 46
Martin VRIJLAND na-akụnye aka na isi. Echere na m nabatara nke ọma ruo ọtụtụ afọ, nke m na-enweghị ike itinye n'okwu.
Kemgbe ncheta ụmụ mmadụ, e nweela nnukwu ihe mgbochi na ọnụ ahịa ezinụlọ anyị. Kwe ka naanị onye serf nwere ike / nwere ihe ọ bụla ...
Ihe ọzọ na-ekwu okwu maka mgbe mgbe.
The Great Game na-aghọ ihe doro anya nye ndị na-amaja anya:
na-achịkwa obodo ọdịmma site na agha obodo (gụọ: njikwa obodo), gbanyụọ (gụọ: orchestrated) site na omume rụrụ arụ nke ndị na-amaghị nke Islamist, na-eduga ná nnukwu akụnụba akụ na ụba nke a kwupụtara na "aka nri" AHRIMAN (gụọ: Rudolph STEINER), REDEEMER (ya bụ, catalism / ọkàikpe Krismas / okpukpe nke ụwa) na-ewetara ihe a na-akpọ nzọpụta, nke ga-agbada ma ọ bụ mmetụta ịhụnanya nke atụrụ ahụ.
Ogologo oge a nile ka esiworo rụọ ọrụ nke ọma ruo narị afọ ole na ole. A mara mma nke ihe nkiri, ọ bụrụ na ị jụọ m ...
" I nwere ike iweta mgbanwe na nhọrọ gị.
Ebumnuche ahụ bụ Problem, Reaction, Solution kọwara »
Nleta nile: 14.499.181